ကိုဗစ်မှ ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ လူနာတွေဆီက သွေးရည်ကြည်ကို အလှူခံလိုက်တဲ့ မျိုးကြီး – Myanmar
ကိုဗစ်မှ ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ လူနာတွေဆီက သွေးရည်ကြည်ကို အလှူခံလိုက်တဲ့ မျိုးကြီး
September 27, 2020 admin Cele 0
IC အဖွဲ.ရဲ. နာမည်ကျော် အဆိုတော် မျိုးကြီးဟာ ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းတုန်းက ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ပြန်လည်သက်သာ ပျောက်ကင်းခဲ့သူပါ။ သူကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ လူနာတွေဆီက သွေးရည်ကြည် Plasma ကို သူရဲ. ဖေ့စ်ဘုခ်ကနေတဆင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး အလှူခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် COVID ရောဂါခံစားရပြီးပြန်လည် ကောင်းမွန်လာခဲ့သူများဆီမှသွေးရည်ကြည်များသည် COVID အရေးပေါ်လူနာများအတွက်အလွန်ပင် အထောက်ကူပြုပါသည်။ အဆိုတော်မျိုးကြီးနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူဟာလည်း သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမျိုးကြီးက သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းရန် ဆန္ဒရှိသူများ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း အခုလိုပဲ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
ကိုဗစ္မွ ျပန္လည္ေပ်ာက္ကင္းသြားတဲ့ လူနာေတြဆီက ေသြးရည္ၾကည္ကို အလႉခံလိုက္တဲ့ မ်ိဳးႀကီး
IC အဖြဲ.ရဲ. နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္ မ်ိဳးႀကီးဟာ ကိုဗစ္ပထမလႈိင္းတုန္းက ကိုဗစ္ကူးစက္ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့သူပါ။ သူကေတာ့ ကိုဗစ္ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ေပ်ာက္ကင္းသြားတဲ့ လူနာေတြဆီက ေသြးရည္ၾကည္ Plasma ကို သူရဲ. ေဖ့စ္ဘုခ္ကေနတဆင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးၿပီး အလႉခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ယခင္ COVID ေရာဂါခံစားရၿပီးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့သူမ်ားဆီမွေသြးရည္ၾကည္မ်ားသည္ COVID အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္အလြန္ပင္ အေထာက္ကူျပဳပါသည္။ အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးနဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူဟာလည္း ေသြးရည္ၾကည္ လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုမ်ိဳးႀကီးက ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ား ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုလည္း အခုလိုပဲ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။
စက်ရုံလုပ်သား ၆ သိန်းကျော်အတွက် သတင်းကောင်း
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက် သားသမီးများ အတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၇.၉.၂၀၂၀ မှ ၃.၁၀.၂၀၂၀) ထိ